Tsy hangozohozo isika satria eo mandrakariva Izy
"Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehôvah, fa eo an-kavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho" - Sal. 16:8.
Eo anivon'ny fahaverezan-tsaina izay hitambesatra amin'ny fanahy, dia tsy misy afa-tsy ilay Iray ihany no afaka hamonjy antsika amin'ny zava-tsarotra rehetra atrehintsika, sy hanamaivana ny ahiahintsika rehetra. Ny anjarantsika dia ny mametraka ny olantsika eo amin'i Jesôsy. Ilaintsika koa ny mahatsiaro fa eo Izy ary mitari-dalana antsika mba hananantsika firaisana Aminy. Ilaintsika koa ny mampifantoka mandrakariva ny saintsika amin'Andriamanitra. Izy no ho herintsika ao anatin'ny fahalementsika. Izy no ho fahendrentsika ao anatin'ny tsy fahalalantsika. Izy no ho hery maharitra ho antsika ao anatin'ny fahosantsika.
Afaka ny mahazo antoka isika fa tsy ilaintsika ny hankany an-danitra mba hangataka an'i Jesôsy hidina ety amintsika. Tsy ilaintsika koa ny hidina any amin'ny lalina mba hangataka Azy hiakatra. Eo anilantsika tokoa mantsy Izy, ary mitsinjo antsika mandrakariva ny fijeriny. Aoka ho tsapantsika mandrakariva fa akaiky dia akaiky antsika ny Tompo mba hanolo-tsaina sy hitari-dàlana antsika. Izany no hany fomba hahafahantsika matoky an'Andriamanitra.
Aoka hobeazintsika sy hofanintsika ny saintsika mba hananantsika finoana feno fahazavan-tsaina, sy hahatakarantsika izany hoe fisakaizana amin'i Jesôsy izany. [...] Tsy tokony havelantsika hihamangatsiaka ny fitiavantsika ny Mpamonjintsika. Raha manana fifandraisana Aminy isika, dia tokony hapetratsika eo anatrehantsika mandrakariva ny Tompo. Tokony handray Azy toy ny Sakaiza be voninahitra isika, ka homentsika Azy ny toerana voalohany eo amin'ny fitiavantsika. Tokony hanambara ny fahatsarany tsy manam-paharoa isika. Ilaintsika koa ny mikolokolo mandrakariva ny faniriana hitombo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesôsy Kristy. Amin'izay dia hifehy ny fiainantsika sy ny toetsika ny Fanahiny (...) Izao ankehitriny izao no fotoana ilan'ny olona indrindra ny fanatrehan'i Kristy eo anilany (...) Ilaintsika ho eo anilantsika mandrakariva ilay Kapitenin'ny famonjena antsika. YI, 19 Jolay 1894ooi